Golaha Ammaanka oo ka hadlay Weerarada iyo Qaraxyada ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledwayne – XAMAR POST
Golaha Ammaanka oo ka hadlay Weerarada iyo Qaraxyada ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledwayne
By Mohamed Abdi On Mar 25, 2022
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa si kulul u cambaareeyay weerarradii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, iyo magaalada Beledweyne, 23-kii March 2022, kuwaas oo ay mas’uuliyadooda sheegatay Al-shabaab, laguna dilay tobannaan qof, ayna ku dhaawacmeen tira intaas ka badan.
“Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa hoosta ka xarriiqay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo dembiilayaasha, abaabulayaasha, iyo maalgeliyayaasha falalkaas argagixisada ah, lana horkeeno sharciga” ayaa lagu yiri bayaanka Golaha Ammaanka.
Golaha Ammaanka ayaa sidoo kale ku boorriyeen dhammaan Dowlad-goboleedyada, ‘si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah iyo go’aannada Golaha Ammaanka ee khuseeya’ inay si firfircoon ay ula shaqeeyaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhammaan hay’adaha kale ee ay khusayso arrintan.
“Xubnaha golaha amaanka ayaa ku celnaya in argagixisadu nooc kasta iyo muuqaallo kasta oo ay leedahay ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka. Waxa ay xaqiijinayaan in dhammaan falalka argagixisanimada ah ay yihiin dambiyo, isla markaana aan qiil loo heli karin, iyada oo aan loo eegin waxa ku kallifay, meel kasta, goor kasta iyo cid kasta oo geysata” ayuu sii raaciyay war-murtiyeedka Golaha Ammana ee Qaramada Midoobay.
Xubnaha Golaha Ammaanka ee QM ayaa sheegay inay ka walaacsa yihiin khatarta Al-shabaab ee Nabadda iyo Ammaanka Somaaliyaa iyo Gobolka. waaxayna ku boorriyeen hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan arrimaha qaranka ee muhiimka ah, oo ay ku jiraan gunaanadka hannaanka doorashada ee socdta, la dagaallanka Al-shabaab iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka bini’aadantinimo ee ba’an ee ka dhacaya Soomaaliya.
Al-shabaab oo wareer ku qaaday Saldhig ay Ciidamada DF ku leeyihiin Sh/hoose
Gen Indha Cadde oo sheegay in ay jiraan Qaraxyo la doonayo in ‘lagu dilo Mucaaradka’